IHigh Plain iyintaba ezintabeni zaseGiant Mountain, etholakala emngceleni weCzech-Polish emngceleni we-Western Silesian Ridge phakathi kweVysoké Kolo neViolík, cishe i-7 km NW from Špindlerův Mlýn. Ngasohlangothini lwePoland lolu luphakama kuneTransmitter of the Snow Pit, okungenzeka yiyo ethakazelisa kakhulu (futhi ngokusobala kakhulu) esakhiweni sezintaba zaseGiant.
Inani eliphakeme laseCzech i-High Plains (indawo ephakeme kunawo wonke endaweni yaseCzech) itholakala eningizimu nentshonalanga yesakhiwo se-transmitter e-1490 m asl. Ngokuya ngemibandela yephrojekthi yezinkulungwane zeBohemia, Moravia neSilesia, lokhu kubizwa ngokuthi inani eliphakeme lesibili leVysoké Kola, ngoba ukuvelela kwesiqongo seCzech (ukuphakama kusuka esihlalweni se-Vysoké Kolo) kungaphansi kwe-1497 m.
Ithafa eliphakeme liyatholakala emgqeni obomvu obonisa ubungani be-Czech-Kipolishi noma kwindlela emakwe ophuzi evela kuLabská bouda.
Ipulpiti kaKrakonoš Mountains Poland Ithafa eliphakeme
Amathegi: Ipulpiti kaKrakonoš Mountains Poland Ithafa eliphakeme
Indawo: 58-573 Piechowice, Polsko